Spiekermann को 8 typographic युक्तिहरु (इन्फोग्राफिक) | क्रिएटिव अनलाइन
एरिक स्पिकर्मन एक हो धेरै मान्यता प्राप्त typographic एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा। केहि समय पहिले, यो टाइपोग्राफी पेशेवर मा दिए फन्ट शिप एक पीडीएफ फाइल धेरै शैक्षिक जुन हामीलाई केही टाइपोग्राफिक तत्त्वहरूको सहि उपयोगमा मार्गदर्शन गर्न हो।
त्यसोभए तपाईं हाम्रोमा देख्नुहुनेछ अनौपचारिक, typ टाइपोग्राफिक सल्लाहहरू जुन एरिक स्पिकर्मनले हामीलाई राम्रो डिजाइन / लेआउट बनाउनको लागि दिन्छ। ध्यान दिनुहोस्:
1 Spiekermann को 8 typographic सुझाव इन्फोग्राफिक
1.1 ठूला अक्षरहरूको सट्टा साना क्याप्स प्रयोग गर्नुहोस्
1.2 जोडको लागि इटालिक प्रयोग गर्नुहोस्
1.3 सामान्य ड्यासको सट्टा ड्यास प्रयोग गर्नुहोस्
1.4 कृपया वक्र उद्धरणहरू
1.5 एल्जेभेरियन संख्या र ट्याब
1.6 सँधै लिगाचर प्रयोग गर्नुहोस्
1.7 बाँया पigned्क्तिबद्ध पाठ, कहिल्यै उचित भयो
1.8 पोइन्टहरूको साथ सूचि
Spiekermann को 8 typographic सुझाव इन्फोग्राफिक
ठूला अक्षरहरूको सट्टा साना क्याप्स प्रयोग गर्नुहोस्
र यहाँ हामीले औंल्याउनु पर्छ। को लागि प्रतिस्थापन ठूला अक्षरहरू सानो क्याप्स ती ठाउँमा जहाँ तपाइँले एक्रोनिम वा संक्षिप्त नाम उल्लेख गर्नुपर्दछ, जस्तै CD-ROM को रूपमा वा फाईल ढाँचामा PNG, JPEG, PDF ... म कसरी सानो क्याप्स प्रयोग गर्ने? तपाईं रूपान्तरण गर्न चाहानुभएको शब्द चयन गर्नुहोस्। दुवै InDesign र मा Illustrator, क्यारेक्टर विन्डो खोल्नुहोस् (विन्डो मेनू> प्रकार> चरित्र)। प्यानलको माथिको दायाँ कुनामा जानुहोस् र आईकनमा क्लिक गर्नुहोस् जसले हामीलाई एर र केही तेर्सो रेखाहरू देखाउँदछ। त्यहाँ एकचोटि, "सानो क्याप्स" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् (अंग्रेजीमा, सानो क्याप्स)।
जोडको लागि इटालिक प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईं राख्न चाहनुहुन्छ भने जोड तपाईंको पाठको निश्चित शब्दमा ठूला अक्षरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। सही कुरा भनेको इटालिक प्रयोग गर्नु हो।
सामान्य ड्यासको सट्टा ड्यास प्रयोग गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित रूपमा, जब हामी कुञ्जीपाटीमा स्क्रिप्ट थिच्दछौं, जुन बाहिर आउँछ सामान्य हो। तर एरिक स्पाइरकर्मनले हामीलाई सिफारिस गर्छन् सट्टामा ड्यास प्रयोग गर्नुहोस् ("Em dash")यो पहिलेको एक व्याकुलको लम्बाइ बुझ्दछ। यसलाई प्राप्त गर्न हामीले कुञ्जीहरूको कुन संयोजन थिच्नु पर्छ? केवल म्याकमा ड्यास कुञ्जीसँग Alt थिच्नुहोस्। विन्डोजमा, Ctrl + ड्यास कुञ्जी।
कृपया वक्र उद्धरणहरू
त्यहाँ छन् उद्धरण को विभिन्न प्रकार: एस्ट्रोस्ट्रफ्स, जो सिधा उद्धरणहरू, वक्र उद्धरणहरू जसले हामीलाई that 66 र numbers 99 नम्बर सम्झाउँछन्; र स्पेनिश उद्धरणहरू। पूर्वनिर्धारित रूपमा, सायद, जब तपाइँ उद्धरण चिन्हमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईले वास्तवमा के प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ एस्ट्रोस्ट्रफ्स। सही व्यक्तिहरू कसरी लागू गर्ने इलस्ट्रेटरमा फाईल मेनू> कागजात सेटअपमा जानुहोस्। विन्डोको तल्लो सेक्सनमा, उद्धरण चिह्न प्रयोग विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईले लेख्न लाग्नु भएको भाषा छनौट गर्नुहोस् (हाम्रो मामलामा, स्पेनिस) र यससँग सम्बन्धित आइकन चयन गर्नुहोस् वक्र उद्धरण (ड्रप-डाउन सूचीमा पहिलो)। समाप्त गर्नका लागि ठीकमा थिच्नुहोस्।InDesign मायदि तपाईंसँग म्याक छ भने, InDesign> प्राथमिकता> शब्दकोशमा जानुहोस्। यदि तपाईंसँग विन्डोज छ भने, सम्पादन> प्राथमिकता> शब्दकोशमा जानुहोस्। भाषा मेनूमा भाषा छनौट गर्नुहोस्। त्यसो भए, उद्धरणहरूमा, डबल उद्धरणहरूको एक जोडी छान्नुहोस्। धेरै छिटो र अधिक सहज तरिकामा प्राथमिकता विकल्प सक्रिय वा निस्क्रिय गर्न। स्मार्ट उद्धरण प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंले निम्न कुञ्जीहरू थिच्नु पर्ने हुन्छ: Shift + Ctrl + Alt + '(Windows) वा Shift + Cmd + Alt +' (म्याक)।
एल्जेभेरियन संख्या र ट्याब
को एल्जेभेरियन संख्या ती ती हुन् पुरानो शैली, कम-बक्स आंकडा। यी पाठ धेरै राम्रो फिट। दशमलवको प्रयोगमा, मेल खानको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ, स्तम्भहरू द्वारा तथ्या of्कहरूको सूचीको मामिलामा, पोइन्ट्सको प्लेसमेन्ट (जसरी तपाईंले इन्फोग्राफिकमा देख्न सक्नुहुन्छ)। यसको स्थान सुधार गर्नका लागि पोइन्ट ट्याबलेट गर्न को लागी आवश्यक छ र प्रत्येक नम्बरको चौडाईलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
सँधै लिगाचर प्रयोग गर्नुहोस्
Ligatures पठनीयता सुधार गर्दछ पाठको, त्यसैले यसलाई सक्रिय गर्न आवश्यक छ जब हामी सक्दछौं। पहिले नै यो जान्नु आवश्यक छ कि सबै फन्टहरूले ligatures को उपयोग गर्न अनुमति दिदैन, किनकी तिनीहरू चिन्तन गर्दैनन्: यो विशेष गरी यसको साथ हुन्छ। नि: शुल्क फन्टहरू, जो तिनीहरूको अभाव छ। InDesign मा ligatures खोल्नुहोस्? पत्र जोडी चयन गर्नुहोस् तपाईमा ligature लागू गर्न को लागी (उदाहरण को लागी ff, tt, ft…)। क्यारेक्टर प्यानल खोल्नुहोस् (विन्डो> टाइप> क्यारेक्टर) र माथी दायाँ कुनामा तपाईले लाइनहरू सहित एरो भेट्टाउनुहुनेछ। त्यहाँ थिच्नुहोस् र Ligatures विकल्प सक्रिय गर्नुहोस्। र कसरी छन् इलस्ट्रेटरमा ligatures? पत्र जोडी चयन गर्नुहोस् जुन तपाइँ ligature लागू गर्न चाहानुहुन्छ (ff, tt, ft…)। खुला प्रकार प्यानल खोल्नुहोस् (विन्डो> प्रकार> खुला प्रकार)। यदि फन्टले ligatures समर्थन गर्दछ, तपाईं पहिलो प्रतिमा चयन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तपाईंले त्यो प्यानलमा देख्नुहुनेछ जसमा अक्षरहरू फाई छन्।
बाँया पigned्क्तिबद्ध पाठ, कहिल्यै उचित भयो
एक पाठ समायोजित गर्नुहोस् विकल्प प्रयोग गरी त्यस्तो नाम राख्छ जुन हामीले धेरै प्रोग्रामहरू (InDesign, Illustrator, Word, PowerPoint…) मा पाउन सक्छौं हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब टाइपोग्राफिक निर्णय हो। के गर्छ यसले नदीको रूपमा चिनिने पाठको बिचमा भद्र सेतो खाली ठाउँहरू सिर्जना गर्दछ। यसले नकारात्मक रूपमा पाठको सुदृढतालाई असर गर्दछ, अन्य चीजहरूको बीचमा। हामीलाई के सल्लाह दिइन्छ, सँधै यसको प्रयोग हो बाँया पigned्क्तिबद्ध। म्यानुअल तरिकाले जस्टिफाइड टेक्स्ट उत्पन्न गर्नु कठिन काम हो, पृष्ठको आकार, स्तम्भ, टाइपोग्राफी र पत्रको आकारबाट नै प्रभावित हुन्छ; प्रतिभाशाली, सटीक कार्य जुन केवल केही पेशेवरहरूले उत्कृष्ट ढute्गले कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्।
पोइन्टहरूको साथ सूचि
एक सूचीमा हाइफन प्रयोग नगर्नुहोस्। एरिक Spiekermann सिफारिस गर्दछ पोइन्टको प्रयोग, आकार जुन हामीलाई उत्तम सूट गर्दछ। तिनीहरूलाई लागू गर्न तपाईं निम्न कुञ्जी संयोजन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ: • Alt + 8 (म्याक), Alt + 0149 (विन्डोज)
Alt + Shift +9(म्याक), Alt + ० 0183 (Windows)
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » Spiekermann Typ typographic सुझाव (इन्फोग्राफिक)
मलाई लाग्दछ कि इन्फोग्राफिकको अनुवादमा केहि त्रुटिहरू छन्।
जसो साथीहरू, "कुकीजको प्रयोग" सूचनाले मेरो मोबाइलमा आधा स्क्रिन ओगटेको छ।
मलाई लाग्छ कि इन्फोग्राफिकमा, अन्तिम पोइन्टले सूचीको लागि हाइफनहरूको सिफारिश गर्छ, बिन्दु होइन;)
फिक्स इन्फोग्राफिक बग, चेतावनीको लागि धन्यवाद!
दानी बीसीएन भन्यो
मलाई टेबुल / स्किम्याटिक्स मन पर्छ! लेखमा धेरै राम्रो विवरण :)
DAni Bcn लाई जवाफ दिनुहोस्
आँखा; यद्यपि उनको सल्लाह एकदम राम्रो छ र सामान्य रूपमा मान्य छ, स्पिकरम्यानले अंग्रेजीका लागि हिज्जे मानक प्रयोग गर्दछ। र त्यहाँ उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्; उदाहरण को लागी:
Cas क्यास्टिलियनमा (वा स्पेनिस) उद्धरण चिन्हहरूको श्रेणीक्रम शुरू हुन्छ (र यो यति धेरै बेवास्ता गरिन्छ कि यो पहिले नै केही लेखकहरूले एक विकल्पको रूपमा विचार गरेको छ) «ल्याटिन» उद्धरण चिन्हहरू सहित, त्यसपछि (यदि तपाईंले उद्धरण फेरि खोल्नुपर्‍यो भने) पहिलो बन्द गर्नु अघि चिन्हहरू) "अ "्ग्रेजी", र अन्तमा (यदि तपाईंले तेस्रो पटक उद्धरणहरू पुन: खोल्नु परेमा) तपाईं 'एकल उद्धरण' प्रयोग गर्नुहुने थियो। उदाहरण: बेनिटोले जवाफ दिए: «तब उसले मलाई 'तिमी जानु पर्छ' भन्यो र मैले उसको कुरा सुनें»
• अर्को भिन्नता (सूक्ष्म): स्पेनिशमा लाइनहरू जुन उप-अनुच्छेद मार्क गर्दछ; «Em dash लाई ड्यास भनिन्छ, मात्र, एक छोटो ड्यास होईन - तिनीहरू उपस्थापनको पाठको सम्बन्धमा खाली ठाउँ बिना राखिन्छन् (-सो- र होइन - so-)।
One अर्को एउटा: बुलेट वा बुलेट (•) वास्तवमा गणनाको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर ब्वाँसिएको पोइन्ट वा मिडपोइन्ट (·) होईन।
मलाई थाहा छ कि यी चीजहरू पहिलो पटक तिनीहरू देखी परेकोमा अनौंठो लाग्न सक्छ, तर वास्तविकतामा के हुन्छ भने अर्थथोपोग्राफीको बारेमा ज्ञान (वा रुचि) को कमीले हामीलाई प्रतिबद्ध गर्न र सामान्य रूपमा हेर्ने त्रुटि जस्तो देखाउँदछ। यो मिल्दो जुल्दो हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, "मेजिको" वा "भिल्वो" वा "हौटोमोबिल" "मेक्सिको", "बिलबाओ" र "अटोमोबाइल" लेख्न, र त्रुटि दोहोर्याएर, यसलाई सहि र सामान्य देखिन्छ (र भित्र वास्तवमा, यदि यो धेरै लामो दोहोर्याइएको छ र फैलिन्छ, यो हुन सक्छ, तर त्यो अर्को कुरा हो।)
यस विषयमा पुस्तकहरूको एक मात्रा छ (अत्यधिक होइन, यो सत्य हो) (अर्थटोपोग्राफी); र यो राम्रोसँग हातमा छ यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने, कहिलेकाँही, टाइपसेटिंगको पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ वा रुचि राख्नु हुन्छ।
नमस्ते दानी, यस्तो रोचक टिप्पणी प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईंको अनुमति संग, मँ तपाईंको ज्ञानको आधारमा पोष्टमा परिमार्जनहरूको एक श्रृंखला गर्न गइरहेको छु। एउटा प्रश्न: यदि फ्लाउन पोइन्ट गणनाको लागि प्रयोग गरीएको छैन भने यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?